Espaina : Sary Sy Tantara 10 Mamintina Ny Taona 2013 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2014 21:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Français, Español
Printsesa Cristina. Sary avy amin'ny bilaogin'i Diego Armario.
Nampanantsoin'ny mpitsara ho any amin'ny fitsarana mba hohadihadiana momba ilay raharaha Palma Arena ny Printsesa Cristina tamin'ny volana Aprily. Tamim-pahagagana sy tsy finoana no nanarahan'ny vahoaka Espaniola akaiky ilay fiampangana voalohany ny fianakavian'ny mpanjaka aminà vesatra mikasika ny kolikoly. Teraka noho ny fanesorana haingana ny fiampangana ny Printsesa ny tsy finoan'izy ireo. Ny tenan'ny mpampanoa lalàna miady amin'ny kolikoly mihitsy, i Pedro Horrach, amim-panesoana, no mpisolovava tsara indrindra niaro an'i Cristina de Borbón [es]. Nandoto tsy misy fanafany ny fianakavian'ny mpanjaka efa miha-manalavitra hatrany ny vahoaka ilay raharaha, ny vahoaka izay mahatsikaritra akaiky fa poak'aty ilay fanambarana nataon'ny Mpanjaka tamin'ny Noely farany teo hoe : ” mitovy ny lalàna ho an'ny olona rehetra”.
Solika mainty mitopa eo amoron-dranomasin'i Galice. Sary avy amin'ny Wikimedia Commons ary lisansa CC avy amin'ny SA 3.0
Vita fotsiny tamin'izao tsy misy voaheloka taorian'ny folo taona nanaovana fanadihadiana sy sivy volana nanaovana fitsarana ny faharendrehan'ilay sambo mpitondra solika Prestige sy ny fahaverezan'ny solika nentiny tany amin'ny sisintanin'i Galice izay niteraka ilay loza ekolojika ratsy indrindra tsy mbola fahita tany Espaina sy niteraka ilay fihetseham-bahoaka iray isan'ny lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenena. Tsy tonga nanoloana ny hazomeloka akory ilay mpanao politika voarohirohy tamin'ilay raharaha, izay voatsikera mafy ny fanapahan-keviny. Voatery nandoa ilay faktioranà 4.328 tapitrisa euro izay tomban'ny faharavana ny vahoaka espaniola- mandrak'izao.
Fahitana ny Plaza Colón any Madrid fenon'ireo mpanao fihetsiketsehana nokarakarain'ny Fikambanan'ireo Niharan'ny Fampihorohoroana. Sary nakarin'i Isabel Durán tao amin'ny Twitter (@IsabelDuran_).
Hetsi-panoherana “escrache” nataon'ny PAH tao Zaragoza . Sary avy amin'ny Bilaogin'i El ventano.
Nitarika ny hetsiky ny “escraches” [karazana hetsi-pikomiana mivantana ] izay ikendrena ny mpanao politika , ny banky ary ny foiben'ireo antoko ny Vondron'ireo Olona Niharan'ny Antoka (PAH) tamin'ny volana Martsa sy Aprily raha toa ka mbola nodinihina tao amin'ny Parlemanta ilay lalàna momba ny antoka. Tezitra mafy tamin'ny nitsikeran'ny mpanao politika avy ao amin'ny PP sy ireo mpamoaka vaovao mitovy fisainana aminy, izay tonga hatrany amin'ny fiampangana azy ho “nazis” sy “mpomba ny ETA” ireo “escraches”. Fa na izany na tsy izany dia nomen'ny parlemanta Eoropeana ny lokan'ny mponina Eoropeana 2013 ny PAH tamin'ny volana Jona 2013.
Ny minisitry ny fampianarana Espaniola, i José Ignacio Wert. Sary avy amin'ny bilaogin'ny Cinereverso.org.
Antontan'isan'ny UE momba ny fiainana manokana ety anaty aterineto. Sary avy amin'ny tranonkalan'ny Parlemanta Eoropeana, fampiasàna nahazoana alàlana. Loharano: European Parliament.
Hetsi-panoheran'ny farany hery havanana any Espaina. Sary avy amin'ny bilaogin'i Xavier Casals.
Arakaraky ny hanatonan'ny fifidianana Parlemanta Eoropeana no hitebiteben'ireo Eoropeana maro fa hitranga indray ny hery farany havanana sy ireo antoko politika, izay manararaotra ny krizy ara-toe-karena mba hanaovana kabary miezinezina mamabo fo sy mankahala mpiavy. Nofoanana ny vondrona Grika Golden Dawn taorian'ny fahafatesan'ilay lehilahy tanora izay heverina fa nataon'ny mpikambana tao aminy ihany, nefa any amin'ireo firenena Eoropeana sasany dia tonga amin'ny haavom-pahefana tsy mbola fahita hatrizay ny hery farany havanana hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa. Aty Espaina, manamarina mandrakariva ny fihetsik'ireo mpikambana ao aminy ny Antokon'ny Vahoaka isaky ny porofoin'ny haino aman-jery fa mifandray amin'ny hery farany an-kavanana ry zareo.
Hetsika manohitra ny tetikasa Eurovegast. Sary nalain'i Valentin Sama-Rojo, tamin'ny 26 Janoary 2013. Fizakàmanana: Demotix.
Nangataka ny firotsahany hofidiana hampiantrano ny Lalao Olaimpika 2020 i Madrid. Mba hanohanana ny firotsahan'ny tanàna dia solontena matanjaka – maherin'ny olona 200- no nankany Buenos Aires tamin'ny Septambra. Na izany aza anefa dia nolavina tamin'ny fihodinana voalohany ilay fangatahana, ary nahatonga fipoaham-pihomehezana nanerana ny firenena sy namela teny ho tsaroan'ny taranaka amam-para hoe : ” kafe con leche iray kaopy ao amin'ny Plaza Mayor” ny teny Anglisy mibadabadan'i Ana Botella, ben'ny tanànan'i Madrid sy ny kabariny nanana endrika toy tantara an-tsehatra dieny mbola tany amin'ny fihodinana voalohany.
http://www.youtube.com/watch?v=aT0BqONBgNsAna Botella's speech to the IOC. Lahatsary nampakarina ao amin'ny YouTube nataon'i BEGO DANGER